OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Dzazvino Kuvandudza: Yazvino Chikoro Nhau
OFFA Poly Portal www.portal.fpo.edu.ng/admission.aspx Tarisa Dzazvino Dzokorora
Akaiswa mukati Nhau dzeChikoro by TMLT Edhisheni musi waJune 18, 2021
OFFA Poly Portal: Semudzidzi we OFFA polytechnic, iyi ruzivo ichave inonakidza kwauri. Iko kune portal yakanyanya dhizaini yevadzidzi ve OFFA Poly.
Mune ino portal, mabasa mazhinji ezvidzidzo anogona kuitwa zviri nyore. Nekudaro, iwe unofanirwa kuverenga kuburikidza nechinyorwa ichi kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekuwana iyo OFFA poly portal. Nekudaro, chii chaunoziva nezve OFFA poly?
Iyo Federal Polytechnic OFFA (FEDPOFFA)
The Federal Polytechnic, Offa, yakavapo muna 1992. Uye zvaive kuburikidza nechiziviso cheMutungamiri. Zvakare, izvi zvakagadzirwa kumuzinda weVake vehumambo Hukuru Olofa weOffa; Oba Mustapha Olawoore Olanipekun Ariwajoye 11.
Zvakare, chirevo ichi chakaitwa neakafanobata Mutungamiri Ibrahim Babangida panguva yekushanya kwenyika muna 1991. Kuwedzerwa, iyo Polytechnic inodada kuchengetedza Tsika Yemhepo.
Mazhinji emabasa ayo, akadai seKubhadhara kweChikoro Mari, Kunyoreswa kweMakosi, Hostel pekugara nezvimwe zvinoitwa online kuburikidza neChikoro Webhu Portal.
Kukosha OFFA Poly Portal
Kana iwe uri kutsvaga OFFA Portal login, mhedzisiro yaunoda iri pazasi. Nekudaro, zvisati zvaitika, ngatitarisei kukosha kweiyi portal.
Pazasi pane makuru mabhenefiti eOFA Poly Portal:
Iko kugadzira account kana kupinda mukati kuti uite zvimwe zvedzidzo zviito zvakasununguka.
Zvakare, apa ndipo panowanikwa mayunivhesiti ese epamhepo uye maitiro ekubvuma.
Pamusoro pezvo, iyo portal inoshandiswa kune zvakasiyana zvinangwa senge fomu yekubvuma kunyorera. Uye inoshandiswa kunyoresa, uye kutarisa kwekupinda runyorwa.
Uyezve, zvinobatsira kuwana chinzvimbo chekubvuma, tsamba yekugamuchira, kurodha mhinduro dzekubvuma uye mamwe mabasa ane chekuita nekugamuchira
Iyo OFFA Poly Portal inogona kuwanikwa kuburikidza neiyi link iripazasi:
Zvakare OFFA Login Portal: https://portal.fpo.edu.ng/Default.aspx?tabid=216
Izvi ndezvekuzivisa vese mukwikwidzi vakatora chikamu muFederal Polytechnic, Offa (FEDPOFFA) online post UTME yekuongorora yekudzidzira kuti ivo vava kukwanisa kutarisa chinzvimbo chavo chekubvuma.
OFFA Poly yekugamuchira runyorwa ine mazita evanokwikwidza vanobvumidzwa mune polytechnic dzakasiyana ND Yakazara-nguva zvirongwa. Kuti uwane urwu runyorwa, tevera ruzivo pazasi:
Enda kune OFFA POLY chinzvimbo chekubvuma kutarisa portal @ http://portal.fpo.edu.ng/Default.aspx?tabid=162.
Ipa yako yekunyorera nhamba mukoramu inodiwa.
Chekupedzisira, tinya kuenderera kuti uwane yako OFFAPOLY yekugamuchira chinzvimbo.
OFFA Poly HND Yekugamuchira Zvirongwa
Iwo manejimendi eiyo Federal Polytechnic, Offa (FEDPOFFA), Kwara State, yava kutengesa mafomu ekugamuchirwa muzvirongwa zvakasiyana zveHigh National Diploma (HND) mangwanani nemanheru echikamu chedzidzo che2020 / 2021.
Isu takupa zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi. Nekudaro, kuti udzidze zvimwe, ramba uchiverenga uchiverenga.
Nekudaro, kunyorera kunokokwa kubva kune vanokodzera kukwikwidza kupinda muHigh National Diploma (HND) yakazara-nguva uye zvikamu-zvenguva-zvirongwa zveFederal Polytechnic, Offa yeiyo 2020/2021 chikamu chedzidzo.
OFFA Poly HND Kupinda Kunopinda Zvinodikanwa
Izvo zvinodiwa zvekupinda kune ese Akakwira National diploma (HND) zvirongwa zvinotevera.
Vadzidzi vanofanirwa kutora National diploma (ND), National Innovative Diploma (NID) muchirongwa chavo chavakasarudza. Pamusoro pezvo, harifanirwe kunge iri giredhi pazasi peZVANHU CREDIT kupatsanura kubva kune inozivikanwa / inozivikanwa Polytechnic, Monotechnic kana Innovation Enterprise Institutions.
SSCE, GCE O'level ine angangoita mashanu (5) echikwereti anodarika muzvidzidzo zvine chekuita kusanganisira Mutauro weChirungu neMathematics zvakawanikwa pasingapfuuri maviri (2).
Zvakare, iyo National technical Setifiketi (NTC) kana National Bhizinesi Setifiketi (NBC) ine chikwereti chepamusoro chinopfuura mukutengesa pamwe nezvine zvakakosha zvidzidzo zvedzidzo izvo zvinofanirwa kusanganisira Mutauro weChirungu neMathematics
Pamusoro pezvo, vanokwikwidza vanofanirwa kuve neanenge gore rimwe chete post National diploma diploma Kudzidziswa ruzivo.
Nekudaro, vavhoti vane giredhi repashure ku ND / NID vanokodzera kuongororwa kwekubvumirwa chero vaine makore mashoma (2) emakore mushure mekudzidziswa kweindasitiri.
Nezve ruzivo rwezvinodiwa zvekupinda zvakasarudzika kune yega yeHurumende National diploma (HND) zvirongwa, mukwikwidzi anofanira kushanyira iyi Polytechnic Portal www.opa.edu.ng
Maitiro Ekunyorera OFFA Poly HND Kubvuma
Kunyorera online kune HND (FT) uye Chikamu-Nguva HND zvirongwa, vanokwikwidza vanofanirwa kushanyira iyi Polytechnic portal: www.opa.edu.ng. Zvakare, tinya pane kubvuma kuti uzadze fomu rekunyorera.
Pamusoro pezvo, ipapo unobhadhara zviuru gumi nezvishanu Naira (N15,000.00) chete yefomu rekunyorera uye hapana imwe mhosva inodiwa.
Vadzidzi vanofanirwa zvakare kukopa yakatemwa kopi setifiketi (s) / mhedzisiro (s) uye mamwe magwaro anodikanwa sezvakataurwa online.
Maitiro Ekunyorera OFFA Poly HND Kugamuchirwa pasina JAMB
Vadzidzi vasina JAMB kunyoresa nhamba vanofanira kutanga kupinda mukati jamb.gov.ng. Ikoko, ivo vanofanirwa kupedzisa maitiro ekunyorera kuti vapinde muFederal Polytechnic Offa.
Zvakare, iwe unofanirwa kubhadhara mari yekunyorera yeZviuru zviuru zvishanu mazana mazana Naira chete (₦ 3,500) kuti uwane iyo JAMB Kunyoresa Nhamba. Tevedza matanho ari pazasi:
Pinda paJAMB CAPS webhusaiti uye kunyoresa.
Bhadhara huwandu hweN3,500 kuti ugone kuwana iyo kunyoresa JAMB nhamba. (Zvinogona kuitwa nyore nyore kubva kuJAMB nzvimbo dzakatenderwa dzeCBT).
Ndokumbira utarise kuti chero Mukwikwidzi asingateedzere nenzira iri pamusoro yekushandisa haakwanise kupihwa mukana wekupinda muThe Federal Polytechnic OFFA. Izvi zvinodaro nekuti data ravo harizove paJamb Central Admissions Processing System (CAPS).
Vadzidzi vanofanirwa kukopa kopi yakaongororwa yesitifiketi (s) / mhedzisiro (yavo) uye mamwe magwaro anodikanwa sezvakataurwa online.
Ndingaite Sei Ini Kunyorera Kwevadzidzi Kutamisa Kugamuchirwa
LASU Mudzidzi Portal
Havard Yunivhesiti Scholarship
Kuongorora OFFA Poly yeAdmissions
Vese vavhoterwa vanofanirwa kurodha zvawanikwa; zvitupa / zvitupa pamusuwo wePolytechnic ypo.edu.ng. Zvakare, vavhoterwa vanofanirwa kuzadza fomu rekuchengetedza pane iyo Polytechnic portal.
ONA kuti kutadza kutevedzera maitiro aya, kunotungamira mukuregererwa kwemumiriri akadaro. Uye zvirevo zvemanyepo zvinotungamira mukubvisirwa kubvumirwa chero nguva yakawanikwa.
Zvakare, vavhoterwa vanorayirwa kushanyira iyi Polytechnic's Portal www.fpo.edu.ng yezvinodiwa zvekupinda zvinodikanwa zvezvirongwa zvavanosarudza uye nerumwe ruzivo rwakakodzera.
Kana iwe uchifunga kuti ichi posvo chinogona kubatsira kune mumwe munhu, ndokumbirawo ugovere pa Twitter, Facebook, WhatsApp kana Email iyo kushamwari. Pane mabhatani pazasi peizvi (zviri nyore kushandisa futi)!
Federal Poly Offa HND Yekugamuchira Fomu 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo
Federal Poly Offa Kugamuchirwa Mari 2020/2021 uye Maitiro Ekubhadhara
Opinionr Scholarship 2021 Ona Yekushandisa Gwaro uye Zvinodiwa
15 Vakuru Vakuru Mahofisi Ehurumende Vanowanzo Bvunzwa Mibvunzo Yekubvunzana
Job Vacancy At Annai Limited 2016 - Nyorera Izvozvi
Nyorera Izvozvi kune Yemumunda Anotengesa Mumiriri Jobho kuGilead Pharmaceutical Limited
BSUM Post UTME Kuongorora Exercise Chirongwa - Timetable 2021 iri Kunze Pamhepo - Tarisa Pano
Tags: federal polytechnic offa vadzidzi portal, fedpoly offa post utme kunyoresa chinongedzo, kukosha kweye federal polytechnic portal, offa poly portal, offa polytechnic portal
« OOU Mudzidzi Portal www.oouagoiwoye.edu.ng Tarisa Dzazvino Chikumbiro Gadziriso
FUNAAB Yevadzidzi 'Portal www.unaab.edu.ng/ Tarisa Dzazvino Kunyorera Portal »
Naijeriya Mapurisa Ekushandira 2021/2022 Kunyorera Fomu Portal
Nigeria Mapurisa Ekutora 2021/2022 Kunyorera Portal Nongedzo
VERITAS Yunivhesiti Makosi uye Chinodiwa | Yakazara Rondedzero Yemakosi Akapihwa
NPF Kuchengeta Portal Login www.policerecruitment.ng 2021/2022 Dzazvino Kuvandudza
UNILORIN Remedial / Pre-degree Yekugamuchira Fomu 2021/2022 Session Portal